Polisy mania • AoRaha
Raha hihemotra ho faty raibe sy reniben-dRafanovàna, handroso kosa hamono an-dry Tsimatimanota! Mba tsy ho valim-panafihana “hamono lolo” ihany anie ny fanambaran’ny Polisim-pirenena manoloana ny fielezan’ny fisian’ny fikasana hikomy ao amin’ity fianakaviamben’ny mpitandro filaminana, isan’ny mampikaikaika ny sarambabem-bahoaka ity.
Fanehoana ny fahasahiana sy fijoroana amin’ny asa goavana miandry azy ireo tokoa ny hoe: “tsy mihetsi-bolomaso”. Fa mba tsy ho eo imolotra na an-taratasy fotsiny ihany e! Ho betsaka foana ny mpanohitra rehefa irosoana ny fanovàna, indrindra fa famongorana ny tanana zatra mitsotra amin’ny kolikoly sy kiantranoantrano ary fikambanan-jiolahy eo anivon’ny Polisim-pirenena.
Zava-dehibe ny finiavana hiady amin’ny fahalovana any amin’itony sokajin’asam-panjakana noheverina ho mpiaro kinanjo toa namono tahaka an’itony. Alaivo sary an-tsaina ny ho fiantraikan’ny fampiharana ny lalàna eto amintsika, raha manomboka madio ny asan’ny Polisy sy Zandary ary ny Fitsarana. Vao mainka tokony hanomezana lesona mahery vaika an’ireo mitady hinia hanohy ny lalan-dririnina ny fanenjehana sy famaizana an’ireto andiana polisy mikononkonona fikomiana ireto. Polisy mania ireo raha tena mitombina ny resaka mandeha, ka aoka tsy hosokajiana ho mihoa-pefy akory fa atsipazo sy avelao any ivelan’ny fefy mba hofehezina miaraka amin’ny fiarahamonina.